Home Wararka Midowga Yurub oo si kulul uga hadlay duqeynta Tigray
Midowga Yurub oo si kulul uga hadlay duqeynta Tigray
Midowga Yurub oo si kulul u cambaareeyay duqeyn shacab ku dhamaadeen oo ka dhacdey gobolka waqoyga Itoobiya ku yaala ee Tigray ayaa ugu baaqay Beesha “in ay hurdada ka toosto”.
Qoraal kasoo baxay EU ayaa lagu sheegay “in wax aan la aqbali karin ay tahay” in shaqaalaha caafimaadka loo diido in ay gargaar u fidiyaan dadka ku dhaawacmay weerarkaas dhanka cirka oo lala beegsaday suuq rayid ah.
“Warbixinnada ku saabsan duqeynta ka dhacay goob suuq ah oo ku taal tuulada Edaga Selus oo u dhow Togoga ee degmada Dogua Tembien ee Gobolka Tigreey 22-kii Juun waa walaac aad u weyn. Kani waa weerar kale oo lagu darayo taxanaha naxdinta leh ee Sharciga Caalamiga ah ee Bani’aadamnimada iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha, xadgudubyada, rabshadaha qowmiyadeed, oo ay weheliso eedeymo culus oo ah isticmaalka gaajo iyo rabshadaha galmada iyo isku dhaca,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Bayaanka ayaa la raaciyey “Midowga Yurub wuxuu si adag u cambaareynayaa beegsiga ula kaca ah ee loo geysto dadka rayidka ah. Tani qiil looma sameyn karo dhinac kasta ha noqotee waxayna ka hor imaaneysaa Sharciga Caalamiga ee Bani’aadamnimada”.
“Xadgudubyadaas qiil looma heli karo iyadoo la adeegsanayo ilaalinta midnimada dhuleed ee Itoobiya dood ahaan. Haddii la xaqiijiyo, xannibaadda ambalaaska ee isku dayaya inay gargaar caafimaad u fidiyaan dhaawacyada ka dib duqeynta waa mid aan la aqbali karin,” ayuu ururka tibaaxay.
EU ayaa tibaaxdey “Dhaqanka noocan ahi wuxuu xadgudub weyn ku yahay Heshiiskii Geneva iyo Sharciga Caalamiga ee Bani’aadamnimada”.
Qoraalka ayaa lagu caddeeyay “Waxaan dib ugu celineynaa baaqii deg-degga ahaa ee ahaa in xabbad-joojin deg deg ah laga sameeyo Tigray iyo in gargaar bani’aadamnimo oo aan xadidnayn la gaarsiiyo dhammaan dadka ay saameeyeen iska-horimaadka gobolka”.
“Waxa ka socda Tigray waa wax laga naxo. Waxaa la joogaa xilligii bulshada caalamku ay hurdada ka toosi lahayd oo ay tallaabo qaadi lahayd. Wakiilka Sare wuxuu Itoobiya ku daray ajandaha Golaha soo socda ee Arimaha Dibada bisha Luulyo si ay ugala hadlaan Dowladaha Xubnaha ka ah Midowga Yurub ficil ahaan,” ayaa lagu soo gabagabeeyay.
Tan iyo November, 2020, gobolka Tigray ayaa wajahaya mowjado colaado ah kuwaasoo galaaftey nolosha boqolaal ruux isla markaana guriyahooda ka barakiciyey kumanaan kale, sida ay sheegtay Qaramadda Midoobay.
Previous articleTurkiga oo Somalia ka sameysanayo xarun laga diri doono dayax-gacmeedyada
Next articleCiidanka Puntland oo gacanta ku dhigay Markab xaalufin ka waday badda Soomaaliya
Ingiriiska oo muwaadiniintiisa uga digtay u safarka & ku nagaanshaha Soomaaliya
Walaac Xoogan Oo La Muujiyey Dhaq Dhaaqyada G/ Gedo